साँघुरिँदै विकल्प- समाचार - कान्तिपुर समाचार
वैशाख २२, २०७८ बिनु सुवेदी
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा विश्वासको मत लिएलगत्तै आफूहरूलाई कारबाही गर्ने सूचना पाएपछि एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले त्यसअघि नै पदबाट राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् ।
सांसदहरूले माग गरेको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । यो बेला फ्लोर क्रस गर्न नेपाल पक्षीय नेताहरूलाई सजिलो हुने विश्वास यो समूहको छ । तर दलहरूबीच यो विषय छलफलकै चरणमा मात्रै छ ।
प्रकाशित : वैशाख २२, २०७८ ०६:४५
वैशाख २२, २०७८ अतुल मिश्र
काठमाडौँ — कोभिड–१९ बाट मंगलबार हालसम्मकै बढी संक्रमण र मृत्यु भएको छ । १६ हजार १ सय ३१ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा ७ हजार ५ सय ८७ जना (४७.०३ प्रतिशत) मा संक्रमण पाइएको छ भने एकै दिन ५५ जनाको मृत्यु भएको छ ।
मृत्यु हुनेमा आधाभन्दा बढी ३०–५० वर्ष उमेर समूहका र तराई जिल्लाका छन् । सातायता मात्रै कोभिडले मृत्यु हुनेको संख्या २ सय २३ पुगेको छ । ‘सक्रिय उमेर समूहका संक्रमितको मृत्यु बढी भइरहेको छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले भने, ‘कोभिडको दोस्रो लहर सुरु भएयता मृत्यु हुनेमा ३० देखि ५० वर्ष उमेर समूहका सबैभन्दा बढी छन् ।’
१०२ वर्षीय पुरुषको सशस्त्र प्रहरी अस्पताल बलम्बुमा मृत्यु भएको थियो । उनलाई कुनै कोमर्बिडिटी थिएन । तराईका जिल्लामा क्षति बढी देखिएको जनाउँदै डा. अधिकारीले भने, ‘आज (मंगलबार) मृत्यु हुने ५५ जनामा अधिकांश तराईका छन् । काठमाडौंमा मृत्यु भए पनि बिरामी तराईकै धेरै छन् ।’ उनका अनुसार तराई क्षेत्रका कोभिडका बिरामी एकदमै क्रिटिकल (गम्भीर) भएर अस्पताल आउने गरेको समेत देखिएको छ ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका कोभिड व्यवस्थापन समितिका संयोजक डा. सन्तकुमार दासका अनुसार अत्यन्त गम्भीर अवस्थाका बिरामी अस्पताल आएका छन् । अस्पताल आउने सबैलाई अक्सिजन आवश्यक देखिएको छ भने अधिकांश बिरामी निमोनिया लिएर अस्पताल पुग्ने गरेका छन् ।
निमोनिया जटिल भएर ढिलो गरी अस्पताल पुग्नेहरूको संख्या बढी हुँदा मृत्यु हुनेहरूको प्रतिशतसमेत यस पटक बढी देखिएको डा. दासले बताए । ‘अन्य कुनै कोमर्बिडिटी पहिचान नभएको बाहिरबाट स्वस्थ देखिने युवाको समेत उल्लेख्य मृत्यु भइरहेको छ ।’
प्रकाशित : वैशाख २२, २०७८ ०६:२४